Momba anay - Hangzhou Precision Machines Co., Ltd.
Dingana fanodinana ranon-javatra vaovao --- fizotry ny ranon-javatra ultrasonic
--- Fanatsarana ny kalitao
Hangzhou Precision Machines Co., Ltd. dia niainga avy amin'ny atrikasa kely an'ny fianakaviana hatramin'ny 1995. Mba hamahana ny fangatahana tsena ho an'ny singa ultrasonic core: transducers.Hangzhou Precision nanjary orinasa indostrialy voalohany momba ny transducer fantsom-pandrefesana ultrasonika ao Shina. Nandritra ny 20 taona niasa mafy, ankehitriny Hangzhou Precision Machines Co., Ltd. dia orinasam-pamokarana teknika mampifangaro ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy amin'ny fitaovana ultrasonic, ny tanky ary ny fitaovana feno. Manana mpiasa, R&D, varotra ary ekipa mpivarotra mihoatra ny 100 izahay. Manokana, ny ekipanay R&D teknika dia nahatratra fiaraha-miasa matanjaka amin'ny oniversite anatiny sy oniversite ary oniversite fikarohana matihanina.
Rehefa avy nandinika nandritra ny fotoana ela ny tsena sy ny fanitsiana ny tena, ankehitriny dia mahazo vokatra tsara izahay amin'ny fanaparitahana fitaovana energie vaovao, fanomanana graphene, fanaparitahana alumina, fanaparitahana, famokarana biodiesel, fanaparitahana silika, fitrandrahana fanafody sinoa, fanamafisana ny indostrian'ny sakafo ary emulsification, fampifangaroana simika. ary ny homogénisation, COD fitsaboana ny maloto, ny fanafoanana ny indostrian'ny fanafody, ny fanorotoroana sy ny fanadiovana.
Hangzhou Precision Machines Co., Ltd. manizingizina ny handresy ny tsena amin'ny kalitao, handresy ny mpanjifa amin'ny serivisy, ary hifantoka hatrany amin'ny tombontsoan'ny mpanjifa.
Manam-pahaizana amin'ny fampiharana ny indostrian'ny ultrasonic izahay. Manana traikefa manan-karena amin'ny fampiharana ultrasonic izahay ary manana fahatakarana manokana ny kolontsain'ny firenena tsirairay. Noho izany, azontsika atao ny mahatakatra sy manolotra vahaolana vaovao arakaraka ny filan'ny mpanjifa samihafa, ary mahazo ny endrika sy ny famokarana dingana mety indrindra.